Maamulka Puntland oo eedeyn dusha uga tuuray Dowladda Federaalka ah. - Awdinle Online
Maamulka Puntland oo eedeyn dusha uga tuuray Dowladda Federaalka ah.
December, 26, 2019 (Awdinle Online)- Maamul Goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa nasiib daro weyn ku tilmaamay in dowladda federalku weli wado dagaal ay ku wiiqayso hannaanka waxbarashada Puntland iyo horumarinta kala duwan mashaariic.
Afhayeenka madaxtooyada Puntland, Jaamac Deperani, ayaa sidaasi ku sheegay warsaxaafadeed kasoo baxay kulanka khamiisle ah ee golaha wasiiradda Puntland.
Puntland ayaa si buuxda u sheegtey in dowladda federalku ay ardayda Puntland u diiday shahaadadii heer federaal ee ay xaqa u lahaayeen ayna arrintaas u xayiran yihiin arday badan oo ku sugan Garowe iyo Muqdisho.
Waxaa kaloo afhyeenku sheegay in dowladda federalku qoraal u dirtay dowladdaha Puntland ka caawiya waxbarashada, iyagoo ka codsaday in la joojiyo in waxbarashada Puntland la taageero.
Maamulka Puntland waxay dhaqamada nuucaas ah ku tilmaamtay kuwo muujinaya in la jabiyay heshiisyadii horey u wada galeen labada dhinac ayna masuuliyadooda qaadidoonto dowladda federalka.
Previous articleAskari shan kun Shillin Somali u diley wiil kalluumeysato ah:- (Sawiro)
Next articleDhuusamareeb oo gaaray Wafdi hordhac u ah booqashada Ra’iisul Wasaare Kheyre